अर्थवाणिज्य – Hot Post News
काठमाडौं । आज (मंगलबार) अमेरिकी डलरसहित प्राय सबै देशको भाउ ओरालो लागेको छ ।आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर ११३ रुपैयाँ ३६ पैसा तथा बिक्रिदर ११३ रुपैयाँ ९६ पैसा रहेको छ।त्यस्तै युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १४९ रुपैयाँ २९ पैसा र बिक्रिदर १५० रुपैयाँ ८ पैसा रहेको छ। साउदी रियाल एकको खरिददर ३० रुपैयाँ २३ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३० रुपैयाँ ३९ पैसा रहेको छ। त्यस्तै कतारी रियाल एकको खरिददर ३१ रुपैयाँ १४ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३१ रुपैयाँ ३० पैसा रहेको छ। युएई दिराम एकको खरिददर ३० रुपैयाँ ८६ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३१ रुपैयाँ ३ पैसा रहेको छ। मलेसियन रिँगिट एकको खरिददर २७ रुपैयाँ २४ पैसा तथा बिक्रिदर २७ रुपैयाँ ३९ पैसा रहेको छ। कुवेती दिनार एकको खरिददर ३ सय ७३ रुपैयाँ २८ पैसा तथा बिक्रिदर ३ सय ७५ रुपैयाँ २५ पैसा रहेको छ ।बहराईन दिनार एकको खरिददर ३ सय रुपैयाँ ६६ पैसा तथा बिक्रिदर ३ सय
फेरी व्हात्तै सुनचाँदीको मूल्य घट्यो
काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मूल्य निरन्तर ओरालो लागेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले दिएको जानकारी अनुसार आइतबारको तुलनामा आज सुन प्रतितोला दुई सय र चाँदी प्रतितोला पाँच रुपैयाँ घटेको हो । आजको लागि छापावाला सुन प्रतितोला ७१ हजार र तेजावी सुन प्रतितोला ७० हजार सात सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको महासंघले जनाएको छ । त्यसैगरी, आइतबार प्रतितोला ८४० रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी प्रतितोला पाँच रुपैयाँ घटेर तोलाको ८३५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । यो पनि पढ्नुहोस काठमाडौँ उपत्यकामा साइकल चलाउन सजिलो छैन। एक त व्यस्त भीडभाड सडक, त्यसमाथि ठूला सवारी साधनले साइकललाई गर्ने व्यवहार ! साइकल चलाउनेहरू भन्छन्– ‘ठूला गाडीले साइकललाई देखिसहँदैनन्। पेलुँलाझैँ गर्छन्।’ यी सबै तथ्यलाई ध्यान दिएर ललितपुर महानगरपालिकाले पाटनलाई साइकल सिटी बनाउने भएको छ। त्यसका लागि साइकल स्टयान्ड निर्माण हुँदै
दिनप्रतिदिन आकाशिंदै गएको प्याजको मूल्य ओरालो लाग्न थालेको छ । भारतबाट निर्यात बन्द भएसंगै आकाशिएको प्याजको मूल्य चीनबाट आउन थालेपछि सस्तो हुँदै गएको हो ।प्रतिकिलो २ सय ५० रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको प्याजको मूल्य अहिले १५० मा झरेको छ । कालिमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार सुकेको प्याजको थोक मूल्य १ सय ५० रुपैयाँ रहेको छ । भारतले प्याज निर्यातमा रोक लगाएपछि नेपाली बजारमा अभाव हुन थालेको प्याजको खुद्रा मूल्य गत आइतबार २ सय थियो भने सोमबार १९० रुपैयाँ कामय भएको थियो । १ सय ८० सम्म झरेको कालिमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारले जनाएको छ ।चीनबाट आयात प्याज कालिमाटीसम्म आइपुग्दा प्रति किलो ८० रुपैयाँ पर्न आउँने खबर आजको राजधानी दैनिकले छापेको छ । दिनप्रतिदिन आकाशिंदै गएको प्याजको मूल्य ओरालो लाग्न थालेको छ । भारतबाट निर्यात बन्द भएसंगै आकाशिएको प्याजको मूल्य चीनबाट आउन थालेपछि सस्तो
आज सबै देशको भाउ बढ्यो, कुन देशको कति ?
काठमाडौं । आज (शनिबार) अमेरिकी डलरसहित प्राय सबै देशको विनिमयदर बढेको छ ।आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर ११४ रुपैयाँ ४९ पैसा तथा बिक्रिदर ११५ रुपैयाँ ०९ पैसा रहेको छ।त्यस्तै युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १४७ रुपैयाँ ७३ पैसा र बिक्रिदर १४८ रुपैयाँ ५० पैसा रहेको छ। साउदी रियाल एकको खरिददर ३० रुपैयाँ ५३ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३० रुपैयाँ ६९ पैसा रहेको छ। त्यस्तै कतारी रियाल एकको खरिददर ३१ रुपैयाँ ४५ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३१ रुपैयाँ ६१ पैसा रहेको छ। युएई दिराम एकको खरिददर ३१ रुपैयाँ १७ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३१ रुपैयाँ ३३ पैसा रहेको छ। मलेसियन रिँगिट एकको खरिददर २७ रुपैयाँ ४१ पैसा तथा बिक्रिदर २७ रुपैयाँ ५६ पैसा रहेको छ। कुवेती दिनार एकको खरिददर ३ सय ७६ रुपैयाँ ४९ पैसा तथा बिक्रिदर ३ सय ७८ रुपैयाँ ४७ पैसा रहेको छ ।बहराईन दिनार एकको खरिददर ३ सय ३ रुपैयाँ ६५ पैसा तथा बिक्रिदर ३ स
आज सबै देशको भाउ घट्यो
काठमाडौं । आज (बिहीबार) अमेरिकी डलरसहित प्राय सबै देशको भाउ ओरालो लागेको छ ।आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर ११३ रुपैयाँ ८७ पैसा तथा बिक्रिदर ११४ रुपैयाँ ४७ पैसा रहेको छ। बुधबार अमेरिकी डलरको भाउ ११४ रुपैयाँ ६८ पैसा रहेको थियो । त्यस्तै युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १४६ रुपैयाँ ६३ पैसा र बिक्रिदर १४७ रुपैयाँ ४० पैसा रहेको छ।साउदी रियाल एकको खरिददर ३० रुपैयाँ ३६ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३० रुपैयाँ ५२ पैसा रहेको छ। त्यस्तै कतारी रियाल एकको खरिददर ३१ रुपैयाँ २७ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३१ रुपैयाँ ४४ पैसा रहेको छ। युएई दिराम एकको खरिददर ३१ रुपैयाँ रहेको छ भने बिक्रिदर ३१ रुपैयाँ १७ पैसा रहेको छ। मलेसियन रिँगिट एकको खरिददर २७ रुपैयाँ २९ पैसा तथा बिक्रिदर २७ रुपैयाँ ४४ पैसा रहेको छ। कुवेती दिनार एकको खरिददर ३ सय ७४ रुपैयाँ ५० पैसा तथा बिक्रिदर ३ सय ७६ रुपैयाँ ४८ पैसा रहेको छ ।बहराईन दिना
तपाईंसँग घर वा अपार्टमेन्ट केही पनि छैन र यसअघि घर वा अपार्टमेन्ट किन्न वा बनाउन बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनु भएको छैन भने बैंकबाट विशेष सुविधासहितको ऋण पाउनु हुन्छ । सबै नेपालीले घर बनाउन वा किन्न सकून भन्ने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले विशेष सुविधासहितको योजना ल्याइदिएको हो । राष्ट्र बैंकको सुविधासहितको ऋण लिन आफूसँग घर वा अपार्टमेन्ट नभएको व्यक्ति हुनुपर्छ । यस्तै, यसअघि बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर घर वा अपार्टमेन्ट किनेको वा बनाएको व्यक्ति भने हुनुहुदैन । राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक घर खरिद गर्ने व्यक्ति (फस्ट होम बायर) लाई लक्षित गरी नयाँ योजना ल्याएको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार २ करोड १४ लाख रुपैयाँसम्मको मूल्यांकन हुने घर वा अपार्टमेन्ट किन्दा ३० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गरे हुनेछ । किनभने राष्ट्र बैंकले गरेको नयाँ व्यवस्था अनुसार १ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्मको आवाशीय घर कर्
Oct312019 by onlinenewsNo Comments
काठमाडौं । ऋणमा लगाम लागेपछि घरजग्गा व्यवसायमा कारोबार घट्यो। केही वर्षयता मूल्य भने स्थिर थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा घरजग्गा व्यवसायी दबाब झेलिरहेका छन्। उनीहरू बजार उठ्ने आसमा एउटा बैंकबाट ऋण लिएर अर्कोको भुक्तानी गर्दै छन्। राष्ट्र बैंकले व्यावसायिक कार्यदक्षता कर कार्यालयबाट परीक्षण गरेर मात्र ऋण दिन परिपत्र गरेको छ। त्यससँगै यस्ता ऋणहरू सदाबहार (इभर ग्रिनिङ) हुने सम्भावना टर्दै गएको छ। विश्वव्यापी रूपमै घरजग्गा कारोबार खुम्चिन थालेको छ। नेपालका पनि प्रमुख सहरमा घरजग्गाको मूल्य संतृप्ति (स्याचुरेसन)मा पुगेको विश्लेषक बताउँछन्। घरजग्गाको मूल्य सस्तिन सक्ने आईएमई समूहका बजार विश्लेषक प्रकाश तिवारी बताउँछन्। उनका अनुसार तीन वर्षदेखि चुलिएको ब्याजदर, बैंकमा ऋण दिने पैसा अभाव र सेयर बजारजस्ता पुँजीगत लाभ आर्जन गर्ने सट्टेबजारको निराशाजनक अवस्थाले प्रभाव
Oct132019 by onlinenewsNo Comments
सुनचाँदीको मूल्य ह्वात्तै घट्यो, हेर्नुहोस् कति छ आज ?
काठमाडौं, असोज नेपाली बजारमा सुनको मूल्य तोलामा पाँच रुपैयाँ घट्दै प्रतितोला ७० हजार चार सय रुपैयाँमा झरेको छ । सुन दशैंअघि प्रतितोला ७० हजार ९ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । त्यस्तै, आज चाँदीको मूल्य पनि तोलामा पाँच रुपैयाँ घट्दै प्रतितोला आठ सय ४५ रुपैयाँमा झरेको छ । चाँदी दशैंअघि प्रतितोला आठ सय ५० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । ‘नमस्ते’ भन्दै सम्बोधन सुरु गरेका सीले के-के भने ? काठमाडौं : नमस्ते,चिनियाँ भाषामा लेखिएको नमस्ते पढेको त्यति राम्रो सुनिएन, बुझिएन होला। त्यति राम्रो छैन होला। शरद ऋतुमा नेपालमा सयौं फूलहरू फुलेका छन् । सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी ज्यूको हार्दिक निमन्त्रणामा म नेपालमा आएको छु।यो मेरो कान्तिपुर , काठमाडौंको पहिलो भ्रमण हो। यहाँ मैले पुराना तथा नयाँ साथीहरुसँग भेटें। नेपालको राजनीतिक स्थायित्व, साम
Oct112019 by onlinenewsNo Comments
नेपाली बजारमा सुनको मूल्य तोलामा पाँच रुपैयाँ घट्दै प्रतितोला ७० हजार चार सय रुपैयाँमा झरेको छ । सुन दशैंअघि प्रतितोला ७० हजार ९ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । त्यस्तै, आज चाँदीको मूल्य पनि तोलामा पाँच रुपैयाँ घट्दै प्रतितोला आठ सय ४५ रुपैयाँमा झरेको छ । चाँदी दशैंअघि प्रतितोला आठ सय ५० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । यो पनि पढ्नुस – तपाईंले बिरेनुनका बारेमा पक्कै सुन्नु भएको होला । यो नुन विभिन्न खालको रोगमा घरेलु उपचारको लागि प्रयोग गर्ने गरिन्छ । आयुर्वेदमा त यसको धेरै औषधिहरुमा प्रयोग हुन्छ । सेतो नुनको सट्टा थोरै मात्रामा बिरेनुनको प्रयोग गर्न सकियो भने यसले फाइदा पुग्छ । बिरेनुन प्राकृतिक नुन हो । यो हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा डाँडापहराबाट निकालिन्छ । बिरेनुनको नियमित सेवनले बाथ, पित्त र कफलाईसमेत नियन्त्रणमा राख्ने काम गर्छ । बिरेनुनको
Oct52019 by onlinenewsNo Comments
विदेशबाट पैसा पठाउँदै हुनुहुन्छ भने आजको विनियमदर हेर्नुहोस्
काठमाडौं / आज बिहीबार अमेरिकी डलरसहित केही देशको विनिमयदर स्थिर रहेको छ। आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर ११३ रुपैयाँ १२ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ११३ रुपैयाँ ७२ पैसा रहेको छ। त्यस्तै युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १३९ रुपैयाँ ६५ पैसा र बिक्रिदर १४० रुपैयाँ ३९ पैसा रहेको छ। साउदी रियाल एकको खरिददर ३० रुपैयाँ १६ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३० रुपैयाँ ३२ पैसा रहेको छ। त्यस्तै कतारी रियाल एकको खरिददर ३१ रुपैयाँ ०७ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३१ रुपैयाँ २३ पैसा रहेको छ। युएई दिराम एकको खरिददर ३० रुपैयाँ ८० पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३० रुपैयाँ ९६ पैसा रहेको छ। मलेसियन रिँगिट एकको खरिददर २७ रुपैयाँ ४ पैसा तथा बिक्रिदर २७ रुपैयाँ १७ पैसा रहेको छ। आज बिहीबार अमेरिकी डलरसहित केही देशको विनिमयदर स्थिर रहेको छ। आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर ११३ रुपैयाँ १२ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ११३ रुपैयाँ ७२ पैस